प्रधानमन्त्रीको संसद सम्बोधनमा के छ ? केहि मुख्य बुँदाहरु | नेपाल घटना
प्रधानमन्त्रीको संसद सम्बोधनमा के छ ? केहि मुख्य बुँदाहरु
प्रकाशित : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:४४
बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएको सवालहरुको जवाफ दिँने क्रममा राखेका भनाइका मुख्य अंशहरु:
संसदमा देखिएको एकता र राष्ट्रिय एकतामा गर्व गर्दछु
सरकारलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने रहर छैन
कसैले जस पाउला भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन
बाँध फुटेकोजस्तो आयो कोरोना, साउनको मध्यमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने
दैनिक पाँच हजार स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ
हाम्रो युवाहरुको भवानालाई बुझ्छु
१० अर्ब खर्चको आफ्नै प्रणाली छ
क्वारेन्टिन मापदण्डअनुकूल भए नभएको अनुगमन भइरहेको
निजीलाई परीक्षण गर्न दिइन्छ
लकडाउनको स्वरुप बदलिन्छ
प्रारम्भमा संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलिले “आज जुन राष्ट्रिय एकता र संयुक्त प्रायसको आवश्यकता छ, हिजो को सभामा देखा पर्‍यो, त्यस एकता प्रती म सिंगै हाउसको सन्दर्भमा गर्व गर्दछु” भनेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गर्ने आकंक्षाले नभई सबै निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि ती कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको बताए। ‘अहिलेको सरकारलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने रहर छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारका सबै निकाय र अंगको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री माताहत केही कार्यालय ल्याइएको हो।’
प्रधानमन्त्रीले छुटेको भूमाग समेटेर नक्सा संशोधन गर्ने विषय सबैको साझा जसको विषय भएको बताएका छन्।
‘पूर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, बचाएका हुन् । आज हामी अडे मात्र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता स्थापित गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘अड्ने कुरामा राष्ट्र एक देखिएको छ र संसदले जनभावना मुखरित गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अगाडी बोल्दै ‘यो कसले जस लिने ? कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय होइन । सिंगो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो । यसमा हामीले लामो समयदेखि उठाएका छौं । जनस्तरबाट उठेको छ । आफ्नै स्वेच्छाले खोज गरेका छन् । तथ्यहरु स्थापित गरेका छन् र, यसमा कसैले पाउला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन । कोही जसबाट छुट्ला कि भन्नु पर्दैन । यो हाम्रो संसदको सर्वसम्मतको निर्णय हुन्छ । सर्वसम्मत गरेपछि सबैका भोट, सबैका भावना एकै ठाउँमा समहित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ’ भनेका छन् ।
ओलीले संसदमा बोल्दै सरकारका प्रयासहरू शतप्रतिशत ठीक नरहेको र केहि कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गरेका छन्
‘म शतप्रतिशत भन्न चाहन्न, छापावाल सुनले पनि ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतको मात्र ग्यारेन्टी गर्छ,’ ओलीले भने, ‘हाम्रा प्रयासहरू पनि शतप्रतिशत ठीक छन्, पर्याप्त छन् भनेर म भन्दिन, कमीहरू हुन सक्छन् ।’
उनले कोरोना सबैले भोग्नुपरेको साझा समस्या रहेको बताए । ‘कोरोना सबैले भोग्नुपरेको साझा समस्या हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधारमा हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण साउनको मध्यमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र कार्तिकबाट कम हुने उनले बताए । त्यसो नहुन पनि सक्छ तर त्यो आँकलन विश्व स्वास्थ्य संठनको हो उनले भने । उनले विदेबाट आउने व्यक्तिहरुको संख्या बढेसँगै यो बढ्न सक्ने पनि बताए ।
पिसिआर टेस्ट्को सन्दर्भमा उनले “दिनमा हामी संग ४५००-५०० पिसिआर सम्म को क्षमता बढाएका छौ, तर आउनेहरुको संख्या पहिले २० हजार्, १८ हजार थियो, अहिले पनि ७-८ हजार, ९ हजार दैनिक आउने संख्या छ” । जब ४५००-५००० हाम्रो क्षमता बिकास गर्न सकिएको छ भने,टेक्निसियन को पनि कुरा छ, किट्स को पनि कुरा छ” भने |
शुरु शुरुमा यस्तो हाहाकार भयो, दुनियाँमा त्यस स्तरमा तयारी कसैले गरेकै थिएन । दुनियाम कसैले पनि तयारी गरेको थिइएन । अझ बलिया देश हरुले बिच बिचमा तानेर लाने पनि स्थिती भयो । हामी त्यसो गर्न सक्दैनौ ।
त्यसैगरी उनले युवाहरुलाई पनि सन्बोधन गरे । उनले भने”म हाम्रो युवाहरुको भवाना लाई बुझ्छु । म सरकारको तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु, सरकार ति समस्या समाधन गर्न प्रयत्नशिल छ तर यो समस्या चौतर्फी रुपमा आक्रमण गरेर एकैचोटी आइलाग्यो, समस्याको समाधान सहज सरल छैन | यो पुंजी संग, सामानको उपलब्धता, त्यसलाई ल्याउने प्रकृया संग सम्बन्धित छ ।”
उनले भने, “केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ । दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुदैन । कामका बेला लेखापरीक्षणतर्फ केन्द्रीत पनि भएका छैनौं । यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नु पर्ने पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरु भ्रष्टाचार गर्नै पर्खि बसेका थिए र बजेट पाउने वित्तिकै भ्रष्टाचार गरे भन्ने पनि होइन । ”
उनले भने, “अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृति पनि देखिन्छ । त्यो प्रवृतिमा नबग्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, भ्रष्टाचार सहदैन । छानविन गर्छ कारवाही गर्छ अनि कानुनको कठघरमा उभ्याउँछ र दोषी भएको पाईएमा कारवाही गर्छ म माननीय ज्यूहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले रेलबाट खाँदिएर आएकाले भारतबाट आउने नागरिक ज्यादा संक्रमित भएको बताउँदै क्वारेन्टिनको प्रबन्ध राम्रो नहुँदा संक्रमण फैलिएको भन्ने स्वीकारेनन् ।
उनले भने, ‘भारतबाट आएकाहरू रेलमा खाँदिएर, कोचिएर आएकाले बाटैमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्छ । यहाँ आएपछि क्वारेन्टिन राम्रो नभएर, लापरबाहीको कारणले होइन । भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्था हुन्छ । क्वारेन्टिन मापदण्डअनुकूल भए नभएको अनुगमन भइरहेको र सुधार पनि गर्दै लगिएको छ ।’
कोरोना परीक्षणका लागि थप आधुनिक उपकरण ल्याइने भन्दै उनले थप पीसीआर मेसिन ल्याइने जानकारी दिँदै भने, ‘थप आधुनिक उपकरण ल्याउनेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसमा हामीले कदम चालिराखेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दिउँसो दुई बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको मोडालिटी पनि हेरफेर गर्ने बताए ।